स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि जाडो याममा समस्या मा पार्ने रुघाखोकीका लागि हाम्रो घरदैलोमै पाइन्छन् यस्ता जडीबुटी - ज्ञानविज्ञान
बूढापाका, बालबालिका र जटिल स्वास्थ्यस्थिति भएकाहरूका लागि सामान्य रुघाखोकीले समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता निम्त्याउन सक्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले सामान्य रुघाखोकी हुँदा पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
तर स्वस्थ व्यक्तिलाई जाडोयाममा सामान्य रुघाखोकी लागे हाम्रा पुर्खाहरूले परापूर्वकालदेखि अपनाउँदै आएका घरेलु उपायबाटै सन्चो हुन सक्छ। जाडोयाममा स्वस्थ व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने रुघाका लागि हाम्रो घरदैलोमै पाइने जडीबुटी आदिको उपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ।
‘तुलसीको पात सामान्य रुघाखोकीका लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार हो,’ डा. ऋषिराम कोइराला भन्छन्, ‘यसले भाइरसलाई समेत निष्क्रिय पार्छ।’ तुलसीको पात चपाउनाले वा चियाजस्तो पकाएर खानाले रुघा निको हुन्छ।
यो मौसममा रुघा प्रभावितले दिनहँु दुईतीन पटक र सामान्य व्यक्तिले समेत एक पटक तुलसीपात, बेसार, अदुवालाई चियाजस्तै पकाएर महको साथ सेवन गर्नाले धेरै फाइदा पुग्छ । धेरै खोकी भए ज्वानो पकाएर पिउँदा खोकी निको हुनुका साथ खकार आदि समेत शरीरबाहिर निस्किन्छ।
ज्वानो र अदुवा हालेर उमालेको पानीको बाफ लिँदा नाक खुल्छ, घाँटीको खसखस दुईतीन दिनमै निको हुन्छ। यस्तै बेसार, मह, अदुवा चपाइरहँदा पनि फाइदा गर्छ। रुघा लाग्दाताका दूधमा बेसार मिलाएर सेवन गर्नाले समेत आराम हुन्छ।
पानको पातमा थोरै मह र अदुवा राखेर दिनमा दुईतीन पटक खाँदा खोकी राम्रो गर्ने डा. कोइराला बताउँछन्। लसुन उमालेको पानी खानाले वा यसको पोटी खाँदा समेत रुघाखोकीमा राहत मिल्छ। रुघाखोकीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हाम्रो रोगप्रतिरोधक क्षमतासँग हुन्छ। आयुर्वेदले रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउन भूमिका खेल्छ।
नुन हालेको मनतातो पानीले कुल्ला गर्दा रुघाखोकीबाट निकै आराम पाइन्छ। कुल्ला गर्दा घाँटीको सुन्नाइ कम हुन्छ, दुख्न पनि छोड्छ। कुल्ला गर्दा मुखभित्रको मांसपेशीको पीडा कम हुन्छ ।
यसले प्रभावित क्षेत्रमा ताप बढाएर रक्तसञ्चार बढाउँछ। यति मात्र नभई, कुल्ला गर्दा मुखको ब्याक्टेरियासमेत नष्ट हुन्छ। ब्याक्टेरियाले मुखभित्रको प्राकृतिक पीएचको सन्तुलन बिगारेको हुन्छ।
नुनपानीले कुल्ला गर्दा मुखको प्राकृतिक पीएचको सन्तुलन सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ। ४ सय व्यक्तिमा गरिएको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने, जाडो याममा मौसमी रुघाखोकी भए वा नभए पनि नुनपानीले दिनमा तीन पटक कुल्ला गर्दा छातीसम्बन्धी संक्रमणको सम्भावना ४० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ।
यस्तै, चियापत्ती, बेसार, नुन हालेर उमालेको पानीले कुल्ला गर्दा घाँटीलाई धेरै सन्चो हुने डा. कोइराला बताउँछन्। तुलसी प्राकृतिक एन्टिसेप्टिक हो, जसले घाँटीको संक्रमण हटाउन सघाउँछ।
विज्ञहरूका अनुसार योगका केही आसनसमेत मौसमी रुघाखोकीको उपचारमा सहायक हुन्छन्। योगले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र शक्तिशाली बनाउनुका साथै मनलाई स्थिर र केन्द्रित गर्न सघाउँछ। योगले रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ, साथै बाहिरी किटाणु/जीवाणुसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ।
मौसमी रुघाखोकी लागेका बेला नाडी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, मत्स्यासन, शवासन आदि गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर रुघाखोकीबाट पीडित भएकाहरूले योगविशेषज्ञको सल्लाह लिएर मात्र आफ्ना लागि उपयुक्त आसन छनोट गर्नुपर्छ।
रुगा खोकीको घरेलु उपचार
१. तुलसीको पात सामान्य रुघाखोकीका लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार हो। यसले भाइरसलाई समेत निष्क्रिय पार्छ।
२. खोकी गढेको भए ज्वानो पकाएको पानी खानुपर्छ।
३. ज्वानो र अदुवा हालेर उमालेको पानीको बाफ लिँदा नाक खुल्छ।
४. पानको पातमा थोरै मह र अदुवा राखेर दिनमा दुई–तीन पटक खाँदा खोकी निको हुन्छ।
५. लसुन हालेर उमालेको पानी खाँदा वा यसको पोटी मात्रै खाँदा पनि रुघाखोकीमा आराम हुन्छ।
६. नुनपानीले दिनमा तीन पटक कुल्ला गर्दा छातीसम्बन्धी संक्रमणको सम्भावना ४० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ।
यस्तो बेला के खान हुदैन ?
१. खोकी लागेको बेला जंक फुड खानु हुँदैन, किनभने त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाउँछ ।
२. यस्तो बेला तारेका खानेकुरा खानु हुँदैन ।
३. फ्रिजमा राखिएका चिसा खानेकुरा तथा आइसक्रिम पनि सेवन गर्नु हुँदैन ।
रुघाखोकी लागेकाले तातो पानीको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका साथै कागती हालेको चिया पिउँदा पनि रुघाखोकीलाई फाइदा पुग्छ ।
यस्तै मह मिसाएको पानी पिउँदा पनि रुघाखोकी लागेका व्यक्तिलाई राहत मिल्छ । तातो पानीमा मह मिसाएर नियमित सेवन गर्दा अन्य समस्याहरुमा पनि राहत मिल्छ ।
रुघा लाग्दा नियमित रुपमा सिगान बग्छ । उक्त सिगा‍न रुमालको सहायतमा पुछ्नु पर्छ । कहिलेकाही हातले पनि पुछिन्छ त्यस क्रममा नाक वरपर ‍ब्याक्टेरिया रहेको हुन्छ । त्यसैले त्यसका लाग नूनपानीले नाक वरीपरि सफा गर्नुपर्छ नाकमा भएका ब्याक्टेरिया नष्ट गर्छ ।
त्यस्तै सफा रुमालको प्रयोग गरेर तातोपानीले बन्द नाकलाई सेक्ने, पानीमा बेसार, नुन र कागती राखेर पिउनाले पनि फाइदा पुग्छ । त्यस्तै तुलसीको पात खानाले पनि रुघाखोकीमा राहत मिल्छ ।
किन जाडोमा धेरै रुघाखोकी लाग्छ, जोगिने कसरी ?
जाडोयाममा शरीरमा भाइरस बढी सक्रिय हुने भएकाले रुघाखोकी बढी लाग्छ। रुघाखोकीमात्रै होइन रुघाखोकीसँगै एलर्जी पनि हुन्छ। नाकभित्र संक्रमण अर्थात् पिनास हुन्छ। नाकमा बढी डिस्चार्ज (नाकबाट कुनै प्रकारको तरल पदार्थ आउनु वा बग्नु) आउने र नाक बन्द हुने हुन्छ।
घाँटीमा टन्सिलको समस्याले स्वास फेर्न गाह्रो भएजस्तो हुन्छ। कसैकसैलाई दमको समस्या पनि अलि बढी हुने गर्छ। शरीरले एक्कासी चिसो सहन सक्दैन,जसले गर्दा जाडो समयमा भाइरसको किटाणु अलि बढी लाग्ने गर्छ।
यसको धेरै अध्ययन त भइसकेको छैन तर जाडोमा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई भाइरलले अलि चाडो आक्रमण गर्छ। रुघाले नाकलाई मात्रै अप्ठ्यारो पारेको हुँदैन। यसले कानमा पनि समस्या पार्छ। कानको सुन्ने शक्तिमा समेत अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। रुघाखोकी लाग्दा ज्वरो आउने, खानेकुरा निल्न गाह्रो हुने अनि ज्यान करकर खाने हुन्छ।
रुघाखोकी लाग्दा के गर्ने ?
रुघाखोकी कस्तो खालको हो त्यसको आधारमा उपचार गर्नुपर्छ। कोही बिरामी हुन्छन्,जसलाई सधै रुघा लाग्छ भने त्यो एलर्जीले हो। धुलो,ढुसी चिसोले अनि कसैलाई फूलको एलर्जी, कुकुर बिरालोको एलर्जीले सधैभरि रुघा लाग्ने हुन्छ। यसका लागि जेबाट एलर्जी भएको हो,त्यहीबाट बच्नु नै पहिलो उपाय हो।
हाम्रो समाजमा जतासुकै मेडिकल छन्। ज्वरो र रुघामा सिटामोल खानु सामान्य हो। तर त्योभन्दा बाहेक एन्टिबायोटिक खाइन्छ। बच्चाहरूलाई कडा ‌औषधि खुवाउने,झोल औषधि अनि भिटामिन पनि दिइन्छ। यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा असर पार्छ नै बच्चाहरूलाई पनि झन् समस्या हुन्छ। त्यस्तो भयो भने बिरामीलाई कडा भन्दा कडा एन्टिबायोटिक खुवाउन पर्छ।
रुघाखोकीबाट कसरी बच्ने ?
रुघाखोकीबाट बच्न बाटोमा हिँड्दा समेत धुलोबाट जोगिनेगरी मास्क लगाएर हिँड्नु पर्छ । साधारण खाले रुघा छ भने घरेलु उपायले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। भाइरलको संक्रमण फैलिएको बेलामा विद्यालयमा जाँदा र अन्यत्र हिँड्दा जोगिनु पर्छ । साधारण खाले रुघाखोकीलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। तर रुघाखोकीसँगै नाकबाट पहेलो सिंगान आउने, नाक बेस्सरी बन्द हुने, घाँटीको समस्या आउने, कानमा पनि समस्या छ भने होसियारी अपनाउनुपर्छ ।
किनकी नाक, कान र घाँटीले एक आपसमा असर पारिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाको हकमा त अझै ध्यान दिनुपर्छ । यदि बालबालिकालाई रुघाखोकी लागेको बेलामा कानमा पनि समस्या देखियो भने चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । रुघाखोकी लाग्दा जे पनि बार्नुपर्छ भन्ने छ, त्यो गलत हो । रुघाखोकी लाग्दा बारेन भने टाइफाइड हुन्छ भन्ने होइन । झोलिलो र तागतिलो खाना सबै खान हुन्छ । तर एकदमै चिसो चिल्लो पिरो खानु हुँदैन । जुन खानाले अन्यलाई पनि असर गर्छ त्यो खान हुँदैन ।
Don't Miss it जाडोमा हिटरकाे प्रयोग गर्नु हुदै छ ? सतर्क भएर गर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा असर पर्नसक्छ !
Up Next चिन्ता भएकाे अवस्थामा आफ्नाे भावनालाइ कसरी कन्ट्राेल गर्ने ? जान्रुहाेस्